Waxaan helay boggaan internetka ah. Waxaana jeclahay in aan oggaado dadka iiga jawaabaya su’aalahayga. Yaad tihiin idinka?
Waxaynu nahay 3 haween.
Labbo inaga mid ahi waxay ku dhasheen dalka Jarmalka.
Mid halkan waxay ku timid sida qaxootanimo sannado baddan kahor.
Waxaynu si wada jir ah ugu wada shaqaynaa hay’ad bulshadeed.
Hay’adeena waxaa lagu magacaabaa AMYNA.
7 dumar kale ayaa sidoo kale halkan ku shaqeeya.
Dadka ku shaqeeya hay’ad bulsho waxay jecelyihiin in ay caawiyaan dadka kale.
Ujeeddada ugu weyni ee hay’adeenu waxay tahay
si looga ilaaliyo gabdhaha iyo wiilasha xad gudub galmo ah.
Hadafkeenu wuxuu yahay in aynu dadka caawino ka hor inta aysan wax dhicin.
Waxaan u sheegnaa dadka kale ee waaweyn waxyaabo ku saabsan arimo baddan oo muhiim ah.
Waxaana uga jawaabnaa su’aalo baddan oo muhiim ah oo khuseeya gabdhaha iyo wiilasha boggaan internetka ah.
Laakiin haddii ay wax xun kugu dhacaan,
waxaan sidoo kale ku tusin doonaa halka caawimaada laga helo!
Ku dhufo linkigan: https://refu-tips.de/so/category/help-hilfe-so/